Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Danny Welbeck Nwata Akụkọ Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Akwukwo Igbo
LB na-egosi Full Story of a Footballer onye kacha mara aha na aha njirimara; “Dat guy welbz".
Anyị Danny Welbeck Akụkọ nwata yana akụkọ Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ eziokwu ndị ọzọ na-apụ apụ.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya, mana mmadụ ole na ole na-ele Danny Welbeck's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Nwa Danny Welbeck Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck mụrụ na 26th ụbọchị nke November 1990 na Longsight, Manchester, United Kingdom. A mụrụ ya nne ya, Elizabeth Tumtuo Welbeck na nna, Victor Chris Welbeck. Ha abụọ bụ nne na nna Ghanian ya.
Danny biri ndụ na Manchester ebe ọ nọ na-egbu ya. Manchester United bụ onye mbụ hụrụ ya dị ka onye dị afọ isii.
Mgbe ọ dị afọ asatọ, ọ masịrị ndị òtù ya bụ Fletcher Moss, ndị ụlọ akwụkwọ ntorobịa Manchester United mesịrị bulie ya.
Danny Welbeck nwere ndị ndụmọdụ abụọ mgbe ọ na-etolite na ụlọ akwụkwọ mmuta nke Manchester United. Onye izizi ya bụ onye ọzọ karịa Ruud van Nistelrooy zụrụ ya. Ọ bụ onye nkwonkwo-ọfụma Irish gbara bọọlụ gbara ya ume. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Roy Keane.
Na 25 Jenụwarị 2010, Welbeck ghọrọ nwa mbụ Alex Ferguson Darren Ferguson bịanyere aka na ya dị ka onye njikwa Preston North End ka ọ na -elekọta klọb na oge 2009-10. Ọ bụ na klọb ka ọ chọpụtara na ọ nwere mmerụ ahụ.
Nke a bụ oge ọ malitere ịhụ ọzịza na ikpere ya nke chọrọ ịwa ahụ idozi. Nsogbu ikpere ya ka na -aga n'ihu na mbinye ego ya ịkwaga Sunderland. Nke a mere ka Man United kpọọ azụ nke ha ka o nye ya ịwa ahụ na ego klọb ahụ.
Na 2 September 2014, na ngwụsị oge nke ụbọchị ikpeazụ, Welbeck sonyeere Arsenal na "Ogologo oge ndibiat" maka ego £ 16 nde.
N'ịkọwa ihe kpatara ọpụpụ ya na onye na-ama ya aka, njikwa Manchester United Louis van Gaal kwuru “Welbeck enweghị ndekọ nke Robin van Persie ma ọ bụ Wayne Rooney.
Anyị hapụrụ ya n'ihi Falcao, kamakwa ikwe ka ndị na -eto eto dabara. Nke ahụ bụ iwu. " Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Danny Welbeck Lovehụnanya Ndụ - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Nwa?
Ndụ mmekọrịta Danny Welbeck zoro ezo ma zoo ya nke ọma. Otú ọ dị, a na-ebo ebubo na ya na nwanyị Nigeria, Opeoluwa bụ onye ugbu a na Canada. Danny zutere ya n'oge ezumike ọ ga-aga Canada.
Opeoluwa na-aga n'ihu na Twitter mgbe o zipụrụ foto ya na onye na-egwu egwu Arsenal, Danny Welbeck nwere nnu nnu nke mere ka ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ were iwe.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Opeoluwa sere foto a; 'Met Welbeck taa na ụmụ okorobịa, ọ bụ ad ** khead' Ihe a merenụ mgbe ndị abụọ ahụ mebiri mmekọrịta ha.
Eze nwa nwanyi, Danny Welbeck zara ya na foto a n'okpuru ebe a ka Opyolowo buopu iji kpochapu foto o buru na mbu.
Danny Welbeck Ndụ Ezinụlọ:
Nna Welbeck si na mpaghara Greater Accra nke Ghana na nne ya si Nkawie na mpaghara Ghanian Ashanti.
Danny Welbeck onye sitere na nzụlite klaasị hụrụ ezinụlọ n'anya ma hụkwa n'anya nọrọ ezumike ezumike ya na obodo ya, Ghana.
Nwa nwoke nwoke a mụrụ na Britain na ezinụlọ ya nọrọ - ndị bi na obodo Ghana kasị ukwuu, Kumasi.
Danny Welbeck Ndụ Nke Onwe:
Danny Welbeck nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike nke Danny Welbeck: Ọ na-emesapụ aka, mara ezigbo mma ma nwee ihu ọchị.
Adịghị ike Danny Welbeck: Ọ nwere ike ikwe nkwa karịa ike ịnapụta, enweghị ndidi, ga -ekwu ihe ọ bụla n'agbanyeghị agbasaghị ọchịchị.
Ihe Danny Welbeck nwere mmasị: Nnwere onwe, njem, nkà ihe ọmụma, ịbụ n'èzí.
Ihe Danny Welbeck choro: Ndị na-agba agba, na-eche echiche na mgbidi na mgbidi.
Na nchịkọta, Danny nwere ọchịchọ siri ike ma dị ike. Echiche uche ya na echiche nkà ihe ọmụma na-akpali ya ịwagharị gburugburu ụwa n'ịchọ ihe ndụ pụtara.
Ọrụ a na-echefu echefu nke Welbeck mere ka ọ pụta ìhè na 2011 mgbe ọ jikọtara ya na Black Stars atọ Asamoah Gyan, Sulley Muntari na John Mensah na Sunderland na mbinye ego.
Mgbe otutu ndi mmadu ato gbaliri ime ka Danny kwenye n'agbata ndi agha Afrika anọ, o kwenyeghi inye dika ihe a Mario Ballotelli onye Muntari kwenyekwara n'otu n'otu ka ọ bụrụ nwa amaala Ghana mgbe ha nọ na Inter Milan.
Otú ọ dị, e kpughere eziokwu ahụ na-akpali mmasị banyere Welbeck na 29 March 2011 mgbe a kpọrọ ya ka ọ bụrụ ndị otu ndị isi nke England maka egwuregwu enyi ha na mba Ghana.
Danny dochiri Ashley Young na nkeji 81 nke 1-1 na Ghana na Wembley Stadium. Asamoah Gyan mezuru Ghana mgbe o mechara Andy Carroll na -bụ mmadu ama ama akpa. Ugbo ndị si Fans Ghanian bịara Danny ka ọ na-atụ ọtụtụ ohere itinye England na-edu ndú.
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Welbeck kwuru na N'ajụjụ ọnụ na…'Ọ bụ oge dị ilu. Enwere m ịhụnanya maka mba abụọ mana enweghị m ike igwu egwu maka abụọ, 'ka o kwuru. 'Enwere m nghọta nke ahụ (boos) buEnweghị m ike ime mmadụ niile obi ụtọ.
'Anọ m na -egwuri egwu maka England na ọkwa otu ntorobịa ọ bụla, yabụ na ọ bụ ọganihu ebumpụta ụwa ịgakwuru ndị okenye. Enwere m obi ụtọ na ọganihu m. '
Ihe anyị ga -echeta ya maka ịla ezumike nka:
Maka ogo ya na ejiji ya. E jiri Welbeck tụnyere ndị na-egwu Arsenal Emmanuel Adebayor na Nwankwo Kanu na-adabere n'ịdị elu. O meela egwuregwu ya na onye ọzọ na-aga n'ihu Arsenal, nwata nwoke na-eto eto Thierry Henry.
Maka ọnụego ọrụ ya: A kọwawo Danny dị ka onye siri ike, ngwa ngwa, ma dịkwa ezigbo mma na ikuku.
Maka mmerụ ahụ ya: Ọ bụ onye isi Groin, Kneel swellings na hamstring merụrụ ahụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Danny Welbeck Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.